I-China Napa echeba ugcobo lweemvana iigusha zomvelisi kunye noMthengisi | Umlandeli
Ezi Mittens zezona zilungileyo zasebusika mitten, izandla zishushu kwiintsuku ezibandayo zentsuku. Ukucheba iigusha kunye nesikhumba seNapa. Ukuhlala okuqinileyo kwesikhumba se-napa nge-silky ethambileyo kunye nobushushu bendalo yoboya begusha ngaphakathi. Yenziwe nge-100% yesikhumba semvu se-merino, yenye yezona ndawo zintle zoboya bezimvu. Isikhumba segusha sendalo sithambile kwaye silula, sifudumele ngokumangalisayo kwaye somelele ngokukodwa, silungele ukuhamba ebusika ebandayo okanye ngorhatya lwasemva kwexesha esilichithe ngaphandle.
● Inqaku lenqaku: LM-010C
Egqithileyo I-100% ye-suede yokwenene yokucheba i-mittens yezikhumba zezimvu ezinomthungo ngaphakathi
Okulandelayo: Izikhumba zezimvu ezenziwe ngezandla ezenziwe ngomthi ezinomnqamlezo